Trafikana zava-mahadomelina Rongony 16 kilao tratra tao Antsirabe
Fiara roa nahitana lehilahy roa avy no voazon’ny polisy avy ao amin’ny « Commissariat Central Antsirabe » noho ny fitondrana rongony 16 kg hiakatra hamonjy an’Antananarivo.
Sakan-dalana nataon’ny polisy avy ao Antsirabe tamina taksibrosy mampitohy an’i Fianarantsoa amin’Antananarivo no nahatrarana rongony milanja 9 kilao ary natao tao anaty gony miisa 2 sy iray harona plastika, ny talata 9 jolay lasa teo tokony ho tamin’ny 4 ora30 maraina. Tra-tehaka tamin’izany ny lehilahy 2 tompon’entana. Avy any Ihosy no nangalana ilay rongony ary nifindra fiara tao Fianarantsoa izy ireo ka saika hamidy eto an-drenivohitra. Ny ampitson’io, ny alarobia 10 jolay tokony ho tamin’ny 3 ora maraina dia taksibrosy mampitohy an’i Ihosy-Antananarivo indray no nosavaina tao Antsirabe ka nahatrarana rongony milanja 7 kilao. Roalahy ihany koa ny tompon’ilay entana ary dia notanana avy hatrany. Tamin’ny fanadihadiana natao no nahalalana fa avy any Ambovombe indray no nakan’izy ireo ilay rongony.